बलिउड नायकभन्दा नायिकाको उचाई बढी ! कसको कति ?
बलिउडमा हाइटका कारण चर्चामा आउने अभिनेत्री पनि रहेका छन् । हाइटका कारण कतिपय हिरोसँग फिल्म खेल्न पनि समस्या पर्ने गरेको छ । बलिउडमा अग्लो हिरो र होची हिरोइनको ट्रेण्ड निकै चर्चीत रहेको छ । तर समय अनुसार कम हाइट भएको हिरो र अग्ली हिरोइनको तालमेल फ्यानहरुले रुचाउन थालेका छन् । विस्तृतमा
चलचित्र कप्सको सुन्दरी देखेर आँखा सन्कियो....
विराट जहाँजहाँ अनुष्का त्यहाँ !
संजय दत्तको सम्पत्ति कति ?
पूजा र आकाशको ‘पोई प-यो काले’मा सौगातको इन्ट्री
बलिउड कलाकारका बाल्यकालका तस्बिर, चिन्नै मुश्किल !
बलिउडमा ‘फ्लप’ ३ अभिनेत्रीः यसरी बने अर्बौको मालिक
‘जात्रै जात्रा’को ‘जीवन यात्रा हो’ रिलिज
सलमान खानको कोसँग पहिलो प्रेम बसेको थियो !
यस्तो छ नेपाल आईडल विजेता रवि ओडको पहिलो गीत
काठमाडौँ । दोस्रो नेपाल आइडल विजेता गायक रवि ओडको पहिलो गीत ‘मिठो बोलीले’ सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार हरि लम्सालको संगीत गरेको उक्त गीत कृष्ण केसीले रचना गरेका हुन् ।
जब सलमान खानबारे आफ्नै पिताले यसो भने
सलीम खानले खुलासा गर्दै भनेका छन् कि उनी आफ्नो छोराका लागि किन फिल्म लेख्दैनन् । बलिउड दबंग खानका पिताले बलिउडलाई धेरै हिट फिल्महरु दिएका छन् ।
प्रियंका चोपडाको अजबगजबको लाइफस्टाइल
बलिउड तथा हलिउडमा आफ्नो प्रतिभा देखाइ सकेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पछिल्लोपटक सबैभन्दा व्यस्त अभिनेत्री हुन् । ‘बर्फी’, ‘फेशन’ जस्ता फिल्ममा सानदार अभिनय देखाएकी प्रियंकाले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मान पनि पाएकी छिन् ।
बलिउडका सबैभन्दा धनी अभिनेत्रीहरु जोसँग छ निजी विमान पनि
६०० भन्दा बढी बलिउड कलाकारले भनेः बिजेपीलाई भोट नदेउ
एजेन्सी । बलिउडका भेट्रान थियटर कलाकारहरुले बिजेपीलाई भोट नहाल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले एक विज्ञप्ति नै निकालेर भारतीय जनता पार्टीलाई भोट नहाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
कसरी अर्जुन कपुर र मलैका नजिकिए ? खान परिवारमा यसरी मच्चिएको थियो भाडभैलो ?
बलिउडमा कुनै समय चर्चित जोडीको रुपमा लिइथ्यो अरबाज खान र मलैका अरोराको जोडी । तर, यो जोडीको एकाएक डिभोर्स भएको थियो । आखिर कसरी हुन पुग्यो उनीहरुबीच डिभोर्स ? कसले लगायो अरबाजको जीवनमा आगो ? अर्जुन कपुर बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेका थिए ।
प्रकाश सपुतकाे 'दाेहाेरी ब्याटल २' युट्युबकाे एक नम्बर ट्रेण्डिङमा
काठमाडौँ । गायक प्रकाश सपुतको दोहोरी ब्याटल–२ युट्युबमा अपलोड गरेको दुई दिनमै नेपालमा १ नम्बरमा परेको छ ।
यी फिल्महरु छोडेकोमा पछुतो मान्छन् अक्षय कुमार
बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् अक्षयकुमार । उनले बलिउडलाई पछिल्लो समय एकपछि अर्को हिट फिल्म दिएका छन् । तर, कुनै समय उनलाई अफर गरेका फिल्महरु उनले खेल्न मानेनन् । ती फिल्महर सुपरहिट भएका थिए । ती फिल्महरु गर्न नपाएकोमा आफुलाई पछुतो समेत भएको उनले बताएका थिए ।
बलिउडका यी चर्चित कलाकार लोकसभा चुनावका उम्मेदवार, जित्लान् त ?
बलिउडमा केही यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् जो राजनीतिमा होमिएका छन् । कोही राजनीतिमा फ्लप भएपछि पनुः बलिउडमा फर्किएका थिए भने कतिको करिअर अझै राजनीतिमा रहेको छ ।
फिल्म निर्देशनमा हात हाल्ने ऐश्वर्या रायकाे चाहना
मुम्बई । बलिउडकी लोकप्रिय अभिनेत्रीमध्ये एक ऐश्वर्या राय अब फिल्म निर्देशनमा पनि हात हाल्न चाहन्छिन् ।
एजेन्सी । धनी हुन निकै ठुलो संघर्ष गर्नुपर्छ । धनी बनिसकेपछि रहन सहन पनि उत्तिकै रहन्छ ।
यी देशहरुले गर्छन् सबैभन्दा धेरै दुध उत्पादन, युके कति औ स्थानमा ?
एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकाको घमण्ड तोडिदै, विश्वकै सबैभन्दा अग्ला भवनहरु एसियामा
यी हुन् विश्वमै सबैभन्दा अग्ला मानिस हुने देशहरु